LIKE sharaf, deeqsinimo, caddaalad, daacadnimo, xaqiiqo iyo waxyaabo kale oo ku saabsan isticmaalka joogtada ah iyo kuwa aan kala sooc lahayn ee ay ka midka yihiin dareenka, saaxiibtinimada ayaa laga hadlayaa iyo xaqiijinta saaxiibtinimada ayaa la abuuray oo qiray meel kasta; laakiin, sida quruxda kale, iyo, inkasta oo ay dareemaan in ay heer sare ah oo dhan ragga, waa curaarta iyo gobolka ugu naadir.
Meel walba oo la isugu keeno dad, waxaa lagu dhejiyaa qaar ka mid ah kuwa u muujiya kuwa kalifaya ama aan jeclayn. Waxaa jira qawaaniinta dugsiga oo wacaya saaxiibtinimadooda. Waxay isweydaarsadaan kalsooni iyo in ay wadaagaan dhaq-dhaqaaqyada iyo cayaaraha iyo tabaha iyo barbaarinta dib-u-dhiska dhalinyarada. Waxaa jira gabar dukaanka, gabar chorus ah, saaxiibtinimo jacayl bulsho. Waxay isku sheegaan sirahooda kale; waxay midba midka kale ka caawinayaan fulinta qorshayaashooda, midna waxaa la filayaa in uu ku dhaqmo wax kasta oo khiyaano ah oo ay qorshaha kale sii wadi karto, ama in la ilaaliyo iyada oo aan la helin marka la raadinayo; xidhiidhkooda wuxuu u ogolaanayaa mid ka mid ah inuu iska furo waxyaabaha kale ee yar ee muhiimka ah oo ay ku jirto danta guud.
Ragga ganacsigu waxay ka hadlaan saaxiibtinimadooda, kuwaas oo sida caadiga ah lagu sameeyo hab ganacsi oo u eg qaab ganacsi. Goorta la waydiisanayo oo la siiyay waa la soo celiyaa. Mid waliba wuxuu siin doonaa kaalmo dhaqaale iyo taageero oo uu magaciisa u dhiibo shirkadaha iyo deymanka kale, laakiin waxay rajeynayaan in ay soo noqdaan. Khatarta ayaa mararka qaar lagu qaadaa saaxiibtinimada ganacsiga iyada oo mid ka caawinaysa dhinaca kale halka uu danihiisa gaarka ah u khatar galiyo; iyo saaxiibtinimada ganacsiga ayaa loo kordhiyay shahaadadaas oo mid ka mid ah uu soo geliyay qaybta weyn ee hantidiisa gaarka ah, si markaa kale, cabsida lumo ama laga lumiyo hantidiisa, ayaa laga yaabaa inay dib u hesho. Laakiin tani ma ahan saaxiibtinimo ganacsi. Saaxiibtinimada ganacsiga waxaa laga yaabaa in lagu qiyaaso qiyaasta ninka Wall Street, oo markaa diyaar u ah inuu abaabulo oo uu ku mashquulo shirkad macdan ah oo qiimo la isweydaarsado, oo raba in uu siiyo muuqaal awood iyo istaagid, wuxuu yiri: "Waxaan kula talin doonaa Mr Moneybox iyo Mr. Dollarbill iyo Mr. Churchwarden, oo ku saabsan shirkadda. Waxay yihiin saaxiibo aniga ah. Waxaan ka codsan doonaa inay qaataan saamiyo badan oo saamiyo ah, waxaanay ka dhigi doonaan agaasimayaal. Waa maxay saaxiibbadaadu u fiican yihiin haddii aanad isticmaali karin. "Saaxiibtinimada siyaasiyiinta waxay u baahan yihiin taageerada xisbiga, abiilka iyo sii wadida nidaamyada kale, soo gudbinta xeer kasta, iyada oo aan loo eegin haddii ay tahay uun, faa'iido u leh bulshada , waxay bixisaa mudnaan gaar ah, ama waa dabeecadda ugu musuqmaasuq badan iyo karaahiyada. "Miyaan ku tiirsanaan karaa saaxiibtinimadaada," ayuu hoggaamiyaha weydiistay mid ka mid ah taageerayaashiisa marka tallaabo adag oo lagu khasbayo dhinaciisa oo lagu soo rogo dadka. "Waxaad heysataa, oo waan ku arki doonaa," waa jawaabta ka heleysa saaxiibtinimada kale.
Waxaa jira saaxiibtinimada udhaxaysa geeleelka iyo ragga aduunka ka mid ah oo ku sharraxay mid ka mid ah iyaga oo sharxaya mid kale, "Haa, si aan u dhisno sharafkii Charlie iyo inaan u dhawro saaxiibtinimadayda, waxaan been u sheegayaa sida sharaf." Saaxiibtinimada u dhexeeya tuugada iyo kuwa kale denbiilayaasha, ma aha oo kaliya in la filayo in midkale uu gacan ka geysto dambiga kale, isla markaana uu ka qaybqaato dembiga sida kufsashada, laakiin wuxuu u tegi doonaa wax kasta oo aad u adag si uu isaga difaaco sharciga ama inuu xoriyadiisa xoroobo haddii la xiro. Saaxiibka udhaxeeya shixnadaha, askarta iyo booliisku waxay u baahan yihiin in falalka hal qof, inkasta oo aysan jirin wax sharaf iyo xishoodba, waa lagu taageeri doonaa oo difaaci doona qof kale si uu u caawiyo inuu xajisto booskiisa ama loo magacaabo mid sare. Iyada oo dhammaan saaxiibtinimadaas waxaa jira jihada fasalka oo leh jimicsi kasta ama jaantus kasta.
Waxaa jira saaxiibtinimo oo ka mid ah macallimiinta, bukaannada, gawaarida, socdaalayaasha iyo sahamiyeyaashooda, kuwaas oo ay sameeyeen isku duubnaanta isku deegaan, ayagoo isku maraaya dhibaatooyin isku mid ah, ogaansho iyo la dhibtoonaya isla khatarta iyo haysashada dariiqooyin isku mid ah. Saaxiibada kuwan waxaa badanaa lagu sameeyaa dareenka ama baahida ilaalinta iskudhafka ah ee khatarta jireed, iyada oo loo marayo hagid iyo caawimaad la siiyo goobaha khatarta ah, iyo gacan ka geysashada xayawaanka duurjoogta ah ama cadowga kale ee kaynta ama lamadegaanka.
Saaxiibtinimadu waa in ay ka soocdaa cilaaqaadka kale sida aqoonta, bulsha-wadaagnimada, isku-kalsoonaanta, aqoonta, jacaylka, jilicsanaanta, ixtiraamka, ama jacaylka. Kuwa aqoonta u leh, waxay noqon karaan kuwo indho la'aan ah ama midba midka kale; saaxiibtinimadu waxay ubaahan tahay mid kasta in uu xiiso iyo tixgelin qoto dheer u leh dhinaca kale. Bulshadu waxay u baahan tahay galmo ku haboon bulshada iyo madadaalada madadaalada; laakiin kuwa ku-meel-gaarka ah waxay la hadli karaan xanuun ama ka-hor-tagaan kuwa ay la wadaagto. Saaxiibtinimadu ma oggola khiyaanadaas. Isku xirnaanshaha waxaa laga yaabaa inuu jirey muddo sanado ah oo ganacsi ah, ama goobo kale oo looga baahan yahay joogitaanka, hase yeeshee waxaa laga yaabaa in uu kufsado oo uu quudiyo midka uu qofku uu yahay mid dareen ah. Saaxiibtinimadu waxay u oggolaaneysaa inaan dareemo sidaas. Aqoonta waxay ka timaaddaa qadarin qoto dheer ama jinsi bulsheed, oo laga yaabo inay ahaato mid macquul ah oo aan niyad jabin; Dareen la'aan xun ama jaahil ayaa ka jiri kara saaxiibtinimada. Saaxiibtinimadu waa ficil ama gobolka uu qof kale leeyahay xiisaha kale ee wadnaha, kaas oo aan laga dheefin ama fahmi karin kan kale; saaxiibtinimadu ma aha mid dhinac ah; Waa isku-dhaf iyo faham labadaba. Comradeship waa shakhsi shakhsiyeed iyo saaxiibtinimo, oo laga yaabo in ay soo afjarto goorta wadaadadu kala go'deen; saaxiibtinimadu kuma tiirsana xiriir shakhsiyeed ama urur; saaxiibtinimadu way jiri kartaa inta u dhaxaysa kuwa aan waligood arkaynin oo ay ku dhamaato, si kastaba ha ahaatee fogaanta meel fog iyo waqti ayaa soo dhexgalaan. Kalsooniddu waa dabeecad qof naftiisa u haysata, maadada ama joogitaanka; dawlad goboleed oo uu si isdaba joog ah uga shaqeynayo, u shaqeynaya sababo, ku dadaalaya helitaanka hamiga qaar ama mid ku habboon, ama cibaadada ilaahnimada. Saaxiibtinimadu waxay u dhexeysaa maskaxda iyo maskaxda, laakiin ma aha maskaxda iyo fikirka, ama mabda'a aan la taaban karin; mana aha saaxiibtinimo cibaadada oo maanka ku haya ilaahnimada. Saaxiibtinimadu waxay u egtahay mid isku mid ah ama wadajir ah oo feker ah iyo ficil maskaxeed iyo maanka. Jacaylku badanaa waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay dareen xooggan oo daba-dheeraaday, dareen xoog leh oo dareen ah oo dareen ah oo muujinaya dareenka iyo jacaylka xagga wax, shakhsi, meel ama joogitaan; iyo jacaylka ayaa si gaar ah loo tixgeliyaa loona adeegsadaa in lagu magacaabo dareenka ama dareenka, ama xidhiidhka qiirada ee u dhexeeyo xubnaha qoyska, inta u dhaxeysa kuwa jecel, ama u dhaxeeya ninka iyo naagta. Saaxiibtinimadu waxay jiri kartaa inta u dhaxaysa xubnaha qoyska iyo ragga iyo dumarka; laakiin xidhiidhka ka dhexeeya jecel, ama ninka iyo xaaskiisa ma aha saaxiibtinimo. Saaxiibtinimadu waxay ubaahan tahay wax micno ah ee dareenka iyo xiriirka jireed. Xiriirka saaxiibtinimo waa maskax, maskaxda, mana aha dareenka. Jacaylka aadanaha xagga Ilaah, ama Ilaaha aadanaha, waa dabeecad aan ka sarreeynin inuu yahay mid ka sarreeya, ama midkasta oo awood leh oo u leh mid ka mid ah kuwa ujooga oo aan awood u lahayn inuu fahmo. Saaxiibtinimadu waxay la socotaa sinnaanta. Saaxiibtinimada waxaa laga yaabaa in la yiraahdo jaceyl, haddii jacaylku uusan ka baqin dareenka; dareenka ama aqoonta xiriirka, oo aan lagu xakamaynin lifaaqyada dareenka; dawlad goboleed taas oo dareenka ka sarreeya oo ka luntay.
Waxaa jira siyaabo kale oo ereyga loo isticmaalay, sida saaxiibtinimada udhexeeya ninka iyo eeyda, faras iyo xayawaan kale. Xidhiidhka u dhexeeya xayawaanka iyo ninka, oo qalad u leh saaxiibtinimada, waa isku midka ah dabeecadda rabitaanka, ama jawaabta rabitaanka xayawaanka ee ficilka maskaxda ku jirta. Xayawaanku waxa uu ka jawaab celinayaa ficillada qofka, waana mahadnaq iyo ufiirsigiisa. Laakiin waxay kaliya ka jawaabi kartaa adeegga, iyo diyaargarow in ay sameeyaan taas oo ah dabeecadda rabitaankiisa ay awood u leedahay inay qabato. Xayawaanku wuxuu u adeegi karaa nin oo si dhib leh ayuu ugu dhiman karaa adeegiisa. Laakiin weli ma jirto saaxiibtinimo oo u dhexeeya xayawaan iyo nin, maxaa yeelay saaxiibtinimadu waxay u baahan tahay isfaham isdhexgal ah iyo jawaab celin maskaxeed iyo fakar, mana jirto wax jawaab celin ah ama isgaarsiinta fikradda xayawaanka ilaa nin. Xayawaanku wuxuu si fiican ugu tarjumi karaa fikirka qofka. Ma fahmi karo fikradda marka laga reebo sida la xidhiidha rabitaankeeda; ma noqon karo asal feker ah, mana u gudbin karo qof wax ka mid ah dabeecadda maskaxda. Isku dheelitirka maskaxda iyo maskaxda iyadoo la tixgelinayo fikradda muhiimka ah ee xiriirka saaxiibtinimada, waa mid aan suurtagal ahayn u dhexeeya nin, maskax iyo xayawaan, rabitaan.
Baadhitaanka saaxiibtinimada runta ah ama been-abuurka ahi waxay ku jirtaa niyad-jab ama dano gaar ah oo qofku leeyahay. Saaxiibnimada runta ahi ma aha oo kaliya danaha bulshada. Waxaa jiri kara saaxiibtinimo u dhexeeya kuwa leh bulsho xiiso leh, hase yeeshee saaxiibtinimada dhabta ah uma maleynayo in wax la siinayo wixii la bixiyay, ama si kasta oo ay u bixiyaan wixii loo qabtay. Saaxiibnimada dhabta ah waa fekerka qof kale iyo u dhaqmidda ama mid kale oo loogu talagalay daryeelkiisa, iyada oo aan loo oggolaan in qof kasta oo danaynaya uu faragalin ku sameeyo waxa loo maleeyo oo loo sameeyo dhinaca kale. Saaxiibnimada dhabta ah waxay ku jirtaa ujeeddo aan naxariis laheyn oo sababa fikirka iyo u dhaqanka qofkasto wanaagsan, iyada oo aan dan ka lahayn.
Ku dhaqanka ama iska dhigista inuu u dhaqmo danaha qof kale, marka arrin ficilkani yahay mid ku qanacsanyahay naftiisa iyo danta shakhsi ahaaneed, ma aha saaxiibnimo. Tani waxaa badanaa lagu muujiyaa halka ay ka jirto jaaliyadaha danaha iyo halka kuwa khuseysa ay ka hadlaan saaxiibtinimadooda midba midka kale. Saaxiibtinimadu waxay socotaa ilaa inta uu ka fekerayo inuusan helin qaybtiisa, ama ilaa inta kale diido inuu isku raaco. Markaa xiriirka saaxiibtinimadu wuu joogsadaa iyo waxa loogu yeedhay saaxiibtinimada dhab ahaantii waxay ahayd xiiso raadin. Marka qofku xiriir la leeyahay saaxiibtinimo oo lala yeesho mid kale ama cid kale, sababtoo ah saaxiibtinimada noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inuu helo kaalmooyin, ama uu rabo rabitaankiisa, ama uu helo himiladiisa, ma jirto saaxiibtinimo. Caddaynta ah in saaxiibtinimo qirasho ah aysan jirin saaxiibtinimo, ayaa la arkaa marka qofku rabo inuu wax kale sameeyo. Saaxiibtinimadu waxay jiri kartaa halka hal ama labadaba ama dhammaantood ay ka heli doonaan faa'iidooyinka saaxiibtinimo; laakiin haddii dano gaar ah ay tahay ujeedada iyaga oo wadajir ah, wadashaqayntooda ayaa u muuqda. Saaxiibka runta ah mid waliba wuxuu leeyahay xiisaha kale ee wadnaha ee aan ka yareynin, sababtoo ah fekerka kale ee kan kale wuxuu ka weyn yahay oo ka muhiimsan rabitaanka iyo himilooyinka, iyo ficiladiisa iyo wax ka qabashada waxay muujinayaan isbedelka fikirkiisa.
Saaxiib dhabta ah ma aqbalayo nolosha qofka saaxiibka ah ee naftiisa halis u ah inuu badbaadiyo qofka. Qofkii rajeynaya ama jecelyahay saaxiibkiisa inuu halis geliyo noloshiisa, inuu been sheego, inuu lumiyo sharaftiisii, si uu u badbaadiyo mid ka mid ah khatartaas, ma aha saaxiib, iyo saaxiibtinimadu kama jiraan dhinaciisa. Daacadnimo weyn ayaa laga yaabaa inay tahay mid muujinaysa saaxiibtinimo marka loo baahdo, sida ilaalinta dheeraadka ah iyo bukaanka ee maskax ahaan ama maskax ahaanba mid kale oo dulqaad leh isaga oo la shaqeynaya si uu u yareeyo dhibkiisa iyo inuu ku caawiyo xoojinta maskaxdiisa. Laakiin saaxiibtinimada dhabta ah looma baahna, waxay mamnuucaysaa, samaynta jidhka ama maskaxda ama maskaxda ama qalbi-jebinta, iyo ixtiraamka waxaa loo isticmaali karaa oo keliya marka xushmadda saaxiibtinimo u baahan tahay qofna wax qalad ah. Saaxiib dhabta ah waa mid aad u sarreeya oo ah heer jismi ah iyo daacadnimo iyo fiicnaanshaha maskaxeed si loo oggolaado in loo hoggaansamo ama u jimicsado si uu u galo shahaadadaas oo ah adeega suurtagalka ah ee saaxiib la ah haddii ay dadka kale dhaawici karto.
Mid ka mid ah waxaa laga yaabaa inuu diyaar u yahay inuu nafsaddiisa naftiisa u huro oo uu xitaa u bixiyo inuu naftiisa u huro sababtoo ah saaxiibtinimada, haddii ay taasi ujeeddo sharaf leh u tahay, haddii uu sidaas ku bixinayo waxyaalahaas oo kale ma bixinayo danaha kuwa ku xiran isaga iyo haddii uu leeyahay danaha noloshu waa la gowracaa oo kaliya, oo uusan ka tegin waajibaad. Waxa uu muujinayaa saaxiibtinimada ugu fiican iyo kan ugu weyn ee aan dhaawici doonin, oo aan wax khalad ah samayn, xitaa marka saaxiibtinimo.
Saaxiibtinimadu waxay u horseedi doontaa mid ka mid ah in uu ku fekerayo ama uu u dhaqmo saaxiibkiisa, si uu uga nasto dhibaatada, si uu ugu qalbi qaboojiyo dhibaatada, si uu u iftiimiyo culayskiisa oo uu caawiyo markuu u baahan yahay, si uu u xoojiyo jirrabaadda, inuu rajo ku qabo rajada, inuu ka caawiyo inuu nadiifiyo shakiyihiisa, si uu ugu dhiirri-galiyo marka uu dhibsado, u sheego sida looga baqdiyo cabsida, sida looga adkaado dhibaatooyinka, u sharax sida loola tacaalayo niyad-jabka iyo in loola jeedo musuqmaasuq fursado, si uu u dego duufaanka noloshiisa, si loogu dhiirigeliyo himilooyinka cusub iyo fikradaha sare, iyo, oo aan marnaba dib u ceshin ama xakamaynin ficilkiisa bilaashka ah ee fekerka ama ereyga.
Goobta, degaanka, duruufaha, xaaladaha, dabeecadda, mowqifka iyo jagada, waxay u muuqdaan inay yihiin sabab ama sababo saaxiibtinimo. Waxay kaliya u muuqdaan inay yihiin. Kuwani waxay bixiyaan keliya goobaha; Ma aha sababaha saaxiibtinimada runta ah oo joogtada ah. Saaxiibtinimada la abuuray oo iminka taagan ayaa ah natiijada ka dhalatay horumar dheer. Ma aha dhacdo keliya oo dhacaya, inkastoo saaxiibtinimadu ay hadda bilaabi karto, lana socon doono oo ay ku noolaan doonto weligeed. Saaxiibtinimadu waxay u bilaabantaa mahadnaq. Mahadsanidu ma aha mahadnaq keliya oo qofka ka faa'iideystaha ah uu dareemayo caawiye. Ma aha mahadnaq la siiyay sadaqo qabow sadaqo, mana dareemayo dareenka si xun loo soo dhaweeyay ama muujiyay wax aan ka liidatey waxa uu ka sarreeyaa ee isaga siiyey. Mahadnaqu waa mid ka mid ah kuwa ugu qurxoon ee wanaaggiisa ah, waana sifo cibaado leh. Raxmadku waa soojiid maskaxda ah wax wanaagsan oo la yiraahdo ama la qabto, iyo qalqal la'aanta iyo ka baxsan wadnaha oo ka baxsan kii u sameeyey. Heerarka mahad celinta oo dhan ayaa lagu tuuraa ama jagooyinka. Addoonku wuxuu u mahad naqayaa mulkiilaha jidhkiisa si naxariis darro ah loo muujiyey, sida duco uu uugu mahadnaqayo ilmo si uu ugu soo tooso rikoodh cad oo ka mid ah wajiga dhibaatada nolosha iyo Ilaah ayaa mahadnaq u leh ninka muujinaya ilaahnimadiisa nolosha. Mahad waxaa leh saaxiibtinimada. Saaxiibtinimadu waxay bilaabmaysaa marka maskaxdu ka baxdo mahadnaq qof kale si naxariis leh oo lagu muujiyey erey ama fal. Raxmadda qaarkeed waa lagu soo bandhigayaa, oo maaha lacag bixinta, laakiin sababo macquul ah; sababtoo ah ficilku wuxuu daba socdaa dareenka wadnaha iyo fekerka, iyo kan kalena wuxuu dareemayaa inuu ku faraxsan yahay xaqiiqda uu ku qanacsan yahay waxa uu sameeyay; iyo sidoo kale, mid kastaa wuxuu dareemayaa daacadnimada iyo roonaanta kale ee naftiisa u gaarka ah, faham isku dhaf ah iyo maskaxba udhaxeeya oo u dhexeeya iyaga oo isdhaafiya saaxiibtinimo.
Dhibaatooyinka ayaa soo bixi doona, saaxiibtinimada marar badan ayaa la isku dayi doonaa, laakiin saaxiibtinimadu waxay qaban doontaa haddii xiisaha naftu aysan ka xoog badneyn. Hadday dhacaan waxyaabo kala gedisan ama u muuqda inay jebinayaan saaxiibtinimada, sida inay tagaan meel fog, ama sida khilaafka soo baxaya, ama waa inay wada xiriiraan, wali, saaxiibtinimada, inkasta oo la jebiyey, maaha dhammaadka. Inkasta oo aan la arki karin kan kale ka hor geerida, saaxiibtinimada, bilowday, weli ma dhamaan. Marka maskaxdani ay dib u dhigto nolosha soo socota ama qaar ka mid ah noloshooda mustaqbalka, mar kale ayay kulmi doonaan, saaxiibadoodana waa la cusbooneysiin doonaa.
Marka ay isu yimaadaan, qaar ka mid ah fekerka erayada ama ficilku waxay ku soo celinayaan maskaxda oo waxay dareemi doonaan oo u malaynayaan inay yihiin qaraabad, iyo in xiriirada xooggan ee xooggan laga yaabo in lagu dhejiyo silsiladda saaxiibtinimo. Mar labaadna saaxiibtinimadaas waa la cusbooneysiinayaa, waxaana muuqata in ay u jajaban yihiin kala go ', khilaaf ama dhimasho; laakiin cusbooneysi kasta oo saaxiibtinimo mid ka mid ah saaxiibada ayaa si fudud u aqoonsan doona kuwa kale iyo saaxiibtinimada ayaa dib loo dhisi doonaa. Ma ogaan doonaan asxaabtooda hore ee jirkooda hore ee noloshooda, hase yeeshee dareenka qaraabada ahi ma noqon doono mid ka xoog badan. Saaxiibo xoogan oo muuqda inay ka soo baxaan fursadda ama aqoonta gaaban, oo ay ku sii socoto dareenka nolosha, ha ka bilaabin shilalka muuqda ee dhacaya kulan fursad. Kulanku ma ahayn shil. Waxay ahayd xiriirka muuqda ee silsilado dheer oo dhacdooyin ah oo kudhaafay nolol kale, kulankana dib u cusbooneysiiyay iyo aqoonsiga dareenka xajinta ayaa ahaa samaynta saaxiibtinimada hore. Qaar ka mid ah ficilka ama muujinta mid ama labadaba waxay sababi kartaa dareenka-saaxibtinimada, waxayna sii wadi doontaa wakhti dambe.
Burburinta saaxiibtinimada waxay bilaabmaysaa marka mid ka mid masayr u ah dhegeysiga bixiyay kan kale, ama dareenka uu saaxiibkiis u leeyahay dadka kale. Haddii uu khiyaaneeyaa saaxiibkiisa hanti, guulo, hibo ama genius, haddii uu jecel yahay inuu saaxiibkiisa hoos ugu dhigo ama ka baxo, dareenka masayrka iyo xaasiddu wuxuu abuuri doonaa ama isticmaali doonaa shaki iyo shaki suurtogal ah waxay u hogaansami doonaan shaqadooda ay burburiyaan saaxiibtinimada. Iyadoo hawshooda sii socota loo yeeri doono jiritaanka khilaafaadka saaxiibtinimo. Jacaylku wuu muuqan doonaa oo wuxuu u kici doonaa isudheellitirka. Tani waxay badanaa ka horeeyaa, halka dano isku mid ah ay tahay mid xoog leh, oo lagu xumeeyo saaxiibtinimo.
Xadgudubka saaxiibtinimo wuxuu bilaabmaa marka qofku doonayo in uu isticmaalo tan kale iyada oo aan tixgelin siinayn. Tani waxaa loo arkaa ganacsi, halka midkuna uu jecel yahay saaxiibkiis inuu dhibco u galo isaga oo u adeega halkii uu ka dhigi lahaa dhibic si uu ugu adeego asxaabtiisa. Siyaasadda waxaa loo arkaa halka qofku isku dayo inuu saaxiibadiisa u isticmaalo danihiisa gaarka ah isaga oo aan rabin inuu u adeego iyaga. Xagga bulshada dhexdeeda xadgudubka saaxiibtinimada ayaa muujinaya marka mid ka mid ah kuwa u yeeraya asxaabta kale, ay jecelyihiin iyo isku dayaan inay saaxiibo u adeegsadaan danihiisa gaarka ah. Laga soo bilaabo codsiga khafiifka ah ee kale si uu u sameeyo waxyaabo xiiso leh sababtoo ah saaxiibtinimo, iyo marka waxqabadka uu ka soo horjeedo rabitaanka kale, xadgudubka saaxiibtinimada ayaa loo qaadi karaa codsi qof kale inuu galo dembi. Marka kale kuwa kale waxay ogaanayaan in saaxiibtinimada qirashada ah ay tahay rabitaanka helitaanka adeegyadiisa, saaxiibtinimada ayaa u jilicsan oo laga yaabo in ay u dhinto, ama waxay u beddeli kartaa ka soo horjeeda saaxiibtinimada. Saaxiibtinimadu maaha in lagu xadgudbo.
Waxa lagama maarmaanka u ah sii wadista saaxiibtinimada waa in mid walbaa uu diyaar u yahay in mid kale uu leeyahay xorriyadda doorashada ee fekerkiisa iyo ficilkiisa. Marka dabeecaddan oo kale ay ku jirto saaxiibtinimo waxay sii jiri doontaa. Marka danta qofka la soo bandhigo oo la sii wado, saaxiibtinimada waxay u badantahay in ay isbeddesho cadaawada, ka hortagga, ka caroodo, iyo nacaybka.
Saaxiibtinimadu waa naxariista maanka waxayna ku saleysantahay oo ku dhisan tahay ruuxa asalka ah iyo midnimada aasaasiga ah ee dhammaanba.
Saaxiibtinimadu waa xidhiidhka maskaxda ee maskaxda iyo maskaxda, kaas oo kordha oo la aasaaso sababtoo ah ujeedada uu qofku u leeyahay fikirkiisa iyo inuu u dhaqmo danaha ugu fiican iyo wanaagga kale.
Saaxiibtinimadu waxay bilaabmaysaa marka ficilku ama fekerka mid ka mid ahi keeno maskax kale ama maskax kale si ay u aqoonsadaan xaasnimada iyaga u dhexeeya. Saaxiibtinimadu waxay sii korodhaa sida fekerka loo maamulo, ficillana waxaa lagu sameeyaa iyada oo aan dan kaligeed ahayn iyo kuwa kale ee wanaagsan. Saaxiibtinimadu si fiican ayaa loo dhisay oo loo dhistay oo aan markaa la jebin karin marka xiriirka la aqoonsan yahay inuu yahay ruuxi ah dabeecaddiisa iyo ujeedkiisa.
Saaxiibtinimadu waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn uguna fiican dhamaan cilaaqaadka. Waxay toosisaa oo soo saartaa oo kobcisaa sifooyinka ugu sarraysa ee maskaxda, iyada oo loo marayo ficilka bani-aadmiga. Saaxiibtinimadu way jiri kartaa waxayna u dhexeeyaa kuwa leh dano shakhsiyadeed iyo rabitaankooda oo la mid ah; laakiin ma aha mid soo jiidasho shakhsiyadeed ama isku mid ah rabitaan waxay noqon kartaa asaasiga dhabta ah.
Saaxiibtinimadu waa astaamaha maskaxda, iyo haddii aan lahayn curaarta maskaxeed waxaa jiri karta saaxiibtinimo dhab ah. Saaxiibtinimadu waa mid ka mid ah kuwa ugu mudan uguna fiican ee xiriirka. Waa inay sameeyaan dhammaan jihooyinka maskaxda; waxay u keentaa sida ugu fiican ee nin inuu u dhaqmo saaxiibkiisa, ugu dambayntana, wuxuu ugu wacan yahay midka ugu fiican si uu u dhaqmo dhammaan ragga. Saaxiibtinimadu waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah, waxayna kicineysaa dhammaan arrimaha kale, ee dhismaha dabeecadda; waxay tijaabisaa meelaha daciifka ah waxayna muujisaa sida loo xoojiyo; waxay muujinaysaa cilladaheeda iyo sida loo soo saaro, waxayna ku hagaysaa shaqada oo leh dadaal aan naxariis lahayn.
Saaxiibtinimadu waxay toosisaa oo u yeertaa naxariis darrida halka ay jirtay wax yar ama naxariis la'aan ah, oo saaxiibtinimo la xiriirta dhibaatooyinka saaxiibtinimo.
Saaxiibtinimadu waxay dardar gelinaysaa daacadnimo iyagoo ku qasbaya khiyaanooyinka iyo dhirbaaxada been-abuurka ah iyo iska-horjeeda inay dhacaan, oo u oggolaanaya dabeecadda dhabta ah in loo arko inay yihiin, iyo si loola jeedo si xushmad leh oo ku sugan waddankeeda. Probity waxaa lagu hormariyaa saaxiibtinimo, adoo eegaya imtixaannada iyo xaqiijinta kalsoonidiisa iyada oo loo marayo dhammaan tijaabooyinka saaxiibtinimada. Saaxiibtinimadu waxay barataa runta iyo hadalka iyo ficilka, iyagoo maskaxdooda ku fekeraya waxa wanaagsan ama ugu fiican saaxiibka, iyagoo keenaya saaxib ah inay ku hadlaan iyada oo aan laaluush lahayn oo uu aaminsan yahay in uu yahay run iyo danta saaxibkiis. Saaxiibtinimadu waxay ku dhisan tahay daacadnimo iyada oo loo marayo aqoonta iyo ilaalinta kalsoonida. Cabsidu waxay kordhisaa koritaanka saaxiibtinimada, iyada oo maqnaanshaha shakiga iyo kalsooni la'aanta, iyo aqoonta iyo beddelidda rabitaanka wanaagsan. Tayada xoogga waxay noqotaa mid xoog badan waxayna ka sii fiicnaaneysaa horumarinta saaxiibtinimada, iyada oo la adeegsanayo danaha kuwa kale. Saaxiibtinimadu waxay ku kobcinaysaa nin, adoo careysiinaya carada iyo caqabadaha fikradaha jirrooyinka, ranco ama cibaadada iyo adoo ka fekeraya wanaagga kale. Dhibaatada waxaa loogu yeedhaa oo lagu dhisaa saaxiibtinimo, iyada oo aan qofku awoodin in uu dhaawaco saaxiibkiisa, saaxiibtinimada uu saaxiibtinimo u kiciyo, iyo iyada oo aan loo oggolaan in saaxiib uu sameeyo waxyaabo kale oo waxyeello u geysan kara. Iyada oo loo maro deeqsinimada saaxiibtinimo, waxa loo waxyooday, in la doonayo in la wadaago oo la siiyo sida ugu fiican ee loo helo saaxiibadiis. Xasillooni waxaa laga bartaa saaxiibtinimo, si sahlan oo farxad leh oo hoos yimaada qofka doonaya danaha ugu fiican ee saaxiibkiisa. Saaxiibtinimadu waxay keeneysaa in la kobciyo dabeecadda, iyadoo la adeegsanayo is-xakamaynta. Saaxiibtinimadu waxay muujinaysaa oo dhiirrigelinaysaa geesinimada, iyagoo keenaya hal qof oo khatar gelin kara, inuu si geesinimo leh u dhaqmo, iyo inuu si taxadar leh difaaco sababaha kale. Saaxiibtinimadu waxay dhiirrigelisaa dulqaad, iyadoo u horseeda mid ka mid ah in ay la socdaan khaladaadka ama khaliijka saaxiibkiis, si ay ugu adkeeyaan inay u muujiyaan isaga marka loo baahan yahay, iyo in la adkaysto waqtiga lagama maarmaanka u ah guuldarrada iyo bedelida wanaagga. Caawimaadda saaxiibtinimo ee koritaanka qiimaha, iyada oo loo tixgelinayo mid kale, iyo xakamaynta iyo daacadnimada iyo heerka sare ee nolosha ee dalab saaxiibtinimo ah. Iyada oo saaxiibtinimo la gaari karo awoodda waxtarka leh, adoo dhagaysanaya dhibaatooyinka qofka, isaga oo ka qayb qaadanaya daryeelkiisa, iyo adoo tusaya habka looga gudbi karo dhibaatooyinka. Saaxiibtinimadu waa dhiirrigeliye nadiif ah, adoo ku tilmaanaya fikradaha sare, adoo nadiifinaya fekerada qof, iyo u hoggaansamida mabaadi'da runta ah. Caawimaadda saaxiibtinimo ee horumarinta takoorka, iyadoo keenaysa in uu raadiyo, dhaleeceeyo oo uu falanqeeyo niyaddiisa, inuu kiciyo, baaro oo uu xukumo fikradiisa, iyo inuu go'aamiyo ficilkiisa iyo shaqadiisa u dhiibto saaxiibkiisa. Saaxiibtinimadu waa kaalmo ku habboon, adoo dalbanaya anshaxa ugu sarreeya, samafal tusaale ah oo ku habboon iyo ku noolaanshaha ujeedooyinkeeda. Saaxiibtinimadu waa mid ka mid ah barayaasha maskaxda, maxaa yeelay waxay nadiifisaa laaluushka oo waxay ubaahan tahay maskaxda in ay aragto xiriirkeeda caqli ahaaneed ee dhinaca kale, si loo cabbiro oo uu u fahmo xidhiidhka; wuxuu siinayaa daneyn kale oo ah qorshooyinka iyo qalabka kale ee ku jira horumarinta iyaga; waxay u keentaa maskaxda in la beddelo, la barbardhigo oo si fiican u dheellitirto iyadoo la iska joojinayo xasiloonida, hubinta efaahinimadooda, iyo in la xakameeyo muujinteeda. Saaxiibtinimadu waxay u baahan tahay maskaxda xakamaynta isbaddalkeeda, ka soo horjeeda caabbinteeda, iyo amar bixinta ka baxsan jahawareerka xaqnimada ee fikradda iyo caddaaladda ficilka.